Saraakiil Archives - HalQaran.com
Jubbaland oo tababar u furtay 50 sarkaal
HalQaran Staff - July 18, 2020
Kismaayo (Halqaran.com) - Madaxweyne ku-xigeenka Dowlad Goboleedka Jubbaland, Mudane Maxamuud Sayid Aadan, ayaa Sabtidii maanta tababar u furay Saraakiisha Ciidanka Jubbaland. Daah furka tababarkan waxaa...
Madaxweynaha Jubbaland oo maanta kulan xasaasi ah la yeeshay saraakiisha Amniga + (SAWIRRO)
Weriye Ahmed Abdi - August 2, 2019
Kismaayo (Halqaran.com) - Madaxweynaha Maamulka Jubbaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa Jimcihii maanta magaalada Kismaayo kula kulmay Saraakiisha Ciidamada Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa...
Saraakiil ka tirsan CXD oo lagu soo tababaray Ugandha oo dalka dib ugu soo laabtay & Al Shabaab oo weerar…
Weriye Ahmed Abdi - July 29, 2019
Muqdisho (Halqaran.com) - 95 sarkaal oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ah oo tababar kusoo qaatay dalka Ugandha ayaa dalka dib ugu soo laabtay. Saraakiishan...
Farmaajo oo Dallacsiiyay Saraakiil ka tirsan boolis-ka Soomaaliyeed
Weriye Ahmed Abdi - July 17, 2019
Muqdisho (Halqaran.com) - Madaxweynaha Soomaaliya, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qaar ka tirsan saraakiisha ciidamada booliska Soomaaliyeed u gartay in la dallacsiiyo darajooyinkooda. Munaasabad lagu maamuusay...